Panasonic Steam Iron NI-W310TSPSG (Blue) ~ ICT.com.mm
HomePanasonic Steam Iron NI-W310TSPSG (Blue)
Panasonic Steam Iron NI-W310TSPSG (Blue)
Brand: Panasonic Power Supply: 2200 W Water Tank Capacity: 200 ml Soleplate: 360° Quick Round Ride Titanium Coating Anti-calc Weight: 1.4 kg Dimension (LxWxH): 270 x 120 x 150 mm Model No:... [Learn more]
Brand: PanasonicSKU: 189811N/ASee more: Lifestyle, New Arrivals, Panasonic, Products, Sewing, Cleaning & Laundry, Shop, Under 100kFilter by: Irons & Garment Steamers
Power Supply: 2200 W
Soleplate: 360° Quick Round Ride Titanium Coating
Dimension (LxWxH): 270 x 120 x 150 mm
Model No: NI-W310TSPSG
Panasonic ရဲ့ NI-W310 Steam Iron နဲ့ ဆိုရင်တော့ မီးပူတိုက်ချိန်တိုင်းဟာ အပန်းဖြေချိန်လိုမျိုး စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်ရတော့မှာ အသေအချာပါပဲနော်။ ၃၆၀ ဒီဂရီ လျင်မြန်စွာလှည့်ပတ်တိုက်နိုင်တဲ့ မီးပူတွေဖြစ်သလို ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုတာကြောင့် တွန့် ကြေနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုတောင် အချိန်တိုအတွင်း ညီညာပြန့်ပြူသွားစေမှာပါ။ အောက်ခံပြားကို တိုက်တေနီယမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ အဝတ်နဲ့မီးပူကပ်ခြင်းမရှိဘဲ မလိုလားအပ်တဲ့ အဝတ်အစားပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်စေပါတယ်။ လိုက်ကာခန်းဆီးတွေ ၊ ချိတ်ထားတဲ့ အဝတ်တွေကို အားကောင်းတဲ့ ရေနွေးငွေ့အားနဲ့ ပက်ဖျန်းပေးနိုင်ပြီး အနံ့အသက်ဆိုးတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေပါရှိတာကြောင့် အချိန်ကုန်လဲသက်သာ ၊ ပင်ပန်းခြင်းလဲမရှိ မီးပူတိုက်နိုင်မှာ သေချာတာမို့ NI-W310 Steam Iron တွေဟာ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် အားအထားရဆုံး မီးပူတွေပါပဲ။
World 1st 360° Quick Multi-Directional
It featuresaspecially designed soleplate that has balance on both front and back ends, you can slide the iron forwards and backwards without lifting the iron. The soleplate is also curved at the centre to allow for smooth sideways motion, markting the 360 Quick Panasonic's Iron cutting down ironing time by 25%.
Total price:K150,000 K133,200
This item: Panasonic Steam Iron NI-W310TSPSG (Blue) K54,000